Iwe pamwe wakambonzwa Spurine, sezvo chirongwa ichi chakabhabhatidzwa nezita rezvematongerwo enyika uye murume wemauto weRepublic Republic. Kana kuti pamwe wauya kuchinyorwa ichi uchitsvaga rumwe ruzivo nekuti iwe unotochiziva uye unoda kutanga kuchishandisa.
Ngazvive sezvazviri, ndichaedza kukupa makiyi nezve chii chinonzi Espurino uye nezvachinogona kukuitira iwe kune ako epamberi mapurojekiti, pamwe nezvimwe zvinokurudzirwa kuti udzidze maitiro ekurironga nenzira yakapusa.
Nguva yadarika takakuudza nezvaAnaconda, chimwe chirongwa chinonakidza chevadi vePython vaida hurongwa arduino mabhodhi nemutauro uyu wekuronga uyo wave kufarirwa zvakanyanya. Chinhu chakafanana nezvazvinoita micropython, asi panguva ino, neEspurino, zvinokuunzira mumwe mukana mutsva uchishandisa mutauro wakasiyana ...
1 Chii chinonzi Espurino?
2 Mahofisi Espurino epamutemo
Chii chinonzi Espurino?
Iyo Espurino chirongwa chakagadzirwa na Gordon Williams muna 2012, sekuyedza kubvumidza kuvandudzwa kwema microcontroller pamapuratifomu akawanda. Pakutanga yanga isiri yakavhurwa sosi, yaingopa yemahara firmware kurodha ye STM32 MCUs.
Muna 2013 chirongwa ichi chaizotora danho rakakosha, kuva open source mushure mekubudirira kwazvo kwemushandirapamwe wemari paKickstarter kuwanda kwevanhu mari Mushandirapamwe uyu wakapfuura nzvimbo yekutanga yekusimudzira, kutsvaga mari yekugadzirawo mabhodhi anogona kutsigira iyi software.
Espurino's firmware ikozvino yatenderwa pasi peMozilla Veruzhinji License 2.0, nepo masampula emakodhi ari pasi peMIT License, zvinyorwa pasi peCreative Commons Attribution-ShareAlike 3.0, uye mafaira ekugadzirwa kwemahara pasi peyekupedzisira futi.
Aya ndiwo maitiro ayo Espurino yepamutemo bheji, iyo yaizoteverwa nekuburitswa kwakawanda kwemamwe maBhaibheri sezvakaitika nemamwe mapurojekiti akafanana naArduino. Pamusoro pezvo, aya mabhodhi airatidzira kuenderana kweArduino-inoenderana nhoo, dzinovapa iwo anonyanya kufadza kugona kwevagadziri uye DIYers.
Parizvino chirongwa ichi chine mukurumbira, chakakosha nharaunda yekusimudzira uye huwandu hwedzidziso uye rubatsiro rwaunogona kuwana paInternet. Naizvozvo, kana iwe uchida JS uye kuronga ma microcontroller, hauna kumbobvira wawana zvakadaro nyore ...
Kodhi sosi kodhi - GitHub
Yepamutemo Webhusaiti - Spurine
Firmware - Dhawunirodha (yemahwendefa akasiyana)
Un microcontrollerIyo inonziwo MCU (Micro Controller Unit), chinhu chinogadzirisika chip chinokwanisa kuita mamwe maodha kubva mundangariro. Izvi zvinogona kuenderana netsananguro yeCPU futi, asi mune iyo MCU, ivo vanowanzo kuve vashoma kumberi uye vane simba, vachinongedza mamwe mabasa akasarudzika, akadai semidziyo yakadzika.
Pamusoro pe mutsauko kubva kuCPU, iyo microcontroller idunhu rakabatanidzwa iro rinosanganisira iyo CPU pachayo, pamwe nemamwe mabhuroko anoshanda senge ndangariro uye iyo I / O system. Ndiri kureva, ikomputa yakazara pane imwechete chip ...
Naizvozvo, iwe unenge uine chakachipa uye yakapusa kifaa icho unogona kuronga kuitira kuti zvavanowana nezvinobuda zviite sezvaunoda uye zvigoita zviito. Iwe unogona kuiita kuti igamuchire ruzivo kubva kune ekunze maseru kana maactuator, uye zvichibva pane izvo zvinotumira mamwe mamasaini kuburikidza nezvakabuda kune vamwe Zvemagetsi zvigadzirwa zvakabatana.
Nenzira, ye tanga neEspurino IDE, haufanire kuisa chero chinhu muhurongwa hwako hwekushandisa, inzvimbo yewebhu-yakavakirwa yaunogona kushandisa kubva pano chaipo mune yako yaunofarira web browser.
Kunyangwe akasiyana webhu mabhurawuza anogona kushandiswa, kupenya iyo firmware yemabhodhi aya zvinokurudzirwa kushandisa Chrome uye plugin inonzi Espurino Web IDE iyo inokurudzirwa kubva kune yepamutemo webhusaiti uye iyo iwe yaunogona kuwana yako Chrome pa Iyi link.
Ndiri kureva mazita evhidhiyo izvo zvinokubatsira iwe kudzidza kuronga nemamwe mapurogiramu mitauro, kusanganisira JS. Nemitambo iyi, pachinzvimbo chekushandisa iyo keyboard kana mbeva kutungamira hunhu kana kusangana nemamiriro ezvinhu chaiwo, chauchazove nacho muturikiri wemutauro uyu kudivi rimwe rekona uye kwaunotanga kuisa kodhi (kutanga ne yakapusa kunyangwe epamberi).
Neiyi nzira, iwe unozodzora mutambo uchishandisa programming mutauro, saka panguva yemitambo yako uchaenda kudzidza zvishoma ndisingazvizive uye paunenge uchifambira mberi mumamishinari ruzivo rwako ruchakura.
Mahofisi Espurino epamutemo
Mushure mekutanga kukura kwe ndiro Espurino yekutanga yakauya mamwe mapurojekiti anowanikwa ekushandisa neIDE neJS. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvavo, heino sumo kune yega yega:
Espurino (chepakutanga): ndiyo ndiro yekutanga, yekutanga kugadzirwa pasi pechirongwa ichi. Hunhu hwavo ndewe:
STM32F103RCT6 32-chidimbu 72Mhz ARM Cortex-M3 MCU
256Kb ye flash memory, 28Kb ye RAM
microUSB, SD chinongedzo, uye JST PHR-2 yekunze bhatiri chinobatanidza
Dzvuku, bhuruu uye girini maLED
Mapedhi anotendera kubatana kweBluetooth module HC-05
44 GPIO ine 26 PWM, 16 ADC, 3 UARTS, 2 SPI, 2 I2C uye 2 DACs.
22 GPIO (9 analog input, 21 PWM, 2 serial, 3 SPI uye 3 I2C).
USB-A chinongedzo chiri mubhodhi.
2 ma LED uye bhatani rimwe paPCB.
STM32F401CDU6 32-chidimbu 84Mhz ARM Cortex-M4 MCU
Ndangariro: 384 Kb ye flash uye 96Kb ye RAM
Spurino WiFi: Iyo ingangoita mapatya bhodhi kune yapfuura, chete kuti zvimwe zvigadziridzo zvakawedzerwa. Semuenzaniso, kukura kwayo kuri 30x23mm, ichikura kuita nzvimbo yeESP8266 WiFi chip. Uye zvakare, USB yakashandurwa kuita microUSB, huwandu hweGPIOs hwadzikiswa kuita 21 (8 analog, 20 PWM, 1 serial, 3 SPI uye 3 I2C). Kune rimwe divi, microcontroller yakawedzeredzwawo, ikozvino STM32F411CEU6 32-bit 100Mhz ARM Cortex-M4 ine 512kb ye flash memory uye 128 kb ye RAM.
Spurino Puck.js: Iri bhatani rakangwara reBluetooth iwe raunogona kuronga nekutenda kune yayo yepakati microcontroller uye muturikiri (pre-akaisirwa) neJS. Uye zvakare, ine 52832Mhz ARM Cortex-M4 nRF64 SoC ine 64kB ye RAM uye 512Kb yemwenje, GPIO, NFC tag, MAG3110 magnetometer, IR transmitter, yakavakirwa-mukati thermometer, pamwe neakareruka uye bhatiri maseru maseru.
Spurino Pixl.js: Icho chigadzirwa chakafanana neicho chakapfuura, asi pachinzvimbo chebhatani inogadziriswa Bluetooth LE smart screen. Chidzitiro chayo chine zviyero zve128 × 64 monochrome, nepo zvimwe zvakasara zvakafanana nePuck.js.
WDCBT42Q: ndiyo yakafanana module sePixl.js uye Puck.js, asi iine zvedongo kanyanga. Mamwe ese ehunyanzvi hunhu anoenderana neakapfuura maviri, asi pasina skrini kana bhatani mune ino kesi ...
Kana uchida tenga yeaya maEspurino mahwendefa iwe unogona kuawana mu yepamutemo webhusaiti chitoro Kubva purojekiti iyi. Iwe unogona zvakare kuiwana kuburikidza nhevedzano ye vaparadzi Vakuru vakapiwa chirongwa ichi, senge mamwe magirosa anozivikanwa seAdafruit, nezvimwe.
CAD: zvese nezve komputa-yakabatsirwa dhizaini software